Nifandona ny fokonolona sy dahalo 5 no maty, 10 naratra, trano 10 may kila
Raikitra ny fifandonana teo amin’ny andian-dahalo avy nanafika sy ny fokonolona ary ny mpitandro ny filaminana izay nanao ny fanarahan-dia.
Olona efatra no maty nandritra ny fifandonana ary folo kosa ireo naratra. Ny alatsinainy lasa teo, no namoy ny ainy, ny iray tamin’ireo fokonolona, ka tafakatra 5 no maty. Tao amin’ny kaominina Tsivory, distrikan’Amboasary atsimo, faritra Anôsy no nitrangan’ny asan-dahalo, ny alahady lasa teo. Omby 18 no lasan’ireo malaso. Araka ny fanazavana voaray, andian-dahalo tsy voafaritra isa nirongo basim-borona sy fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika tao amin’io kaominina io. Nanapoaka basy nentina nampitahorana ny fokonolona tao an-tanàna ireo dahalo. Namaly ny fokonolona, ka teo no nahatonga ireo olon-dratsy nandoro ny tanàna, ka trano 10 tafo no may nodoran’izy ireo, izay levona hatramin’ny vary tahiry sy entana maro. Omby 18 tao am-bala, an’olona samy hafa no voaroba. Niroso tamin’ny fanarahan-dia ny fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana, ka nisy ny fifampitifirana teo amin’ny roa tonta. Olona 5 no namoy ny ainy ary sivy naratra, izay mbola tsaboina ao amin’ny CsbII ao Tsivory amin’izao fotoana izao. Mbola mitohy ny fikarohana ireo dahalo mpanafika hatramin’ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra.